Maqaal: Madaxwaynaha dowlad deegaanku oo ummadiisa Ku takri falay - Latest News Updates
Maqaal: Madaxwaynaha dowlad deegaanku oo ummadiisa Ku takri falay
Madaxwaynaha dowlad deegaanku ummadiisa ayuu ku takri falay oo addoonsaday, Ethiopianimo ayuu shafka ugu tumay oo yidhi waad tihiin, maanta Soomaalinimo lagama gadan karo, halganka gobonimo doonka isagoo raggii hogaaminayay ee xataa Xabsiyada dowlada dhexe laga soo fasaxay oo Oromayga wadanka qabsaday sii daayay dib u xidh-xidhay oo curyaamiyay maanta gobonimo doon baan ahay ma iibsamayso.
Oromada ku dhawaad 400 km oo dhul ah buu uga tanaasulay. Intuu xilka hayay ee ay soo siqayeen waxay Cabdi ciidankiisa Liyuugu ka dagaalamayeen gobolka Mudug marka maanta Oromo ayaa dhulkeenna dhacaysa markuu madaxweynuhu leeyahay ma dhul baa hadhsan wixiiba qaatee? Awoodii dhulka difaaci lahayd saw adigii dadkaaga iyo xigtadaada ku leexiyay maaha?
Baqdin uu dadkiisa ka qabo ayaa keentay inuu kuwii ONLF ahaa ee xabsiyada federaalka ah laga sii daayay dib ugu xidh-xidho jeelka beesha sharafta leh loogu magac daray ee haldoorkeedii lagu xaniinyo siibay. Isla cabsidaas ayaana keentay inuu xataa reer Miyigii hubka ka aruursado oo ay gaadho inay ulo ku dagaalamaan iyagana qoryo nool nool lagu laayo. Ciidamada Federaalka ah ee aad na leedahay waa Oromo Jigjiga qabsaday ee iska celiya waa la arkaa inay been cad tahaye, Oromadu iska celiyay hadday dhab kaa tahay oo aysan kursi ku adkaysi kaa ahayn dee Oromadu deegaanadda Soomaalida bilahan ba waa haysteen dadkana waa ku xasuuqayeen waadna daawanaysay marka kurkooda la wad wadaye maxaad wax uga qaban wayday?
Anigu shakhsiyan waan rabay oo taageersanaa maadaama aanay jirin awood milateri oo la isaga celiyo Ethiopia loogana xoroobo maanta in deegaanku dhaqnaado, is maamulo lagana saaro ciidamadii Federaalka ahaa ee tacadiga badnaa, waana kamid ahaa dadkii xalka u arkayay in Cabdi yahay nin waxuun qaban kara waxaase i bartay hab dhaqanka ciidamada Jirridda ah ee Liyuuga la yidhaahdo oo laf dhuun gashay ku noqday nolosha maatada iyo Soomaalida ay ka dhasheen iyo raali ahaanshihiisii.
Waxay ahayd siyaasad ka weyn oo loo degey taasoo ahayd Soomaalida isku adeegsada oo kan ONLF iyo kan LIYUUGA ah labaduba waa Soomaaliye ha is qudh bixiyaan. Kadibna Addis Ababa halaga dhaho ”Isku biirsha imisaa ka baxay bahaha Soomaali?”
Si kasta oo ay ahaataba waxaan u arkaa Cabdi inuu fursad maanta haysto uu naftiisa ku daahirin karo ”tan Ilaahay waa meesheedee” ha uga faaideeyo deegaanka iyo halganka xalaashaa wuxuu gacanta kusii hayo hana ku amro inta yar ee kasii amar qaadanaysa inay la bahoobaan haldooradooda fogaan araga ah ee wuxuu maanta arkay isagoo aan dhalan arkay, hana ku barto Ethiopian inaanu abaal lahayn (hadii loo ooyo iyo hadii la sheegtaba)
Soomaalida kasoo horjeeddana waxaan odhan lahaa waxaa idinku wajahan mawjad mideysan oo idinka itaal roon idinkana tiro badan yaan la idiin adeegsan Cabdi oo maanta tusaale u ah in nin kasta oo la adeegsado halkiisa ku danbaynayo, Ka faaideysta fursadda umaddiinana isku duuba odeygana raadiya haddii ba wax u kordheen.